Burma Partnership | Burma's Military Elections Info Hub » 88 Generation Students
Our struggle for democracy has already reached its’ 22nd anniversary, if we count from the 8888 nation-wide pro-democracy uprising. On this anniversary, we again recognize that it was the nation-wide uprising, not the parliamentary debate that abolished the Burma Socialist Programme Party dictatorial regime of Bo Ne Win and his 1974 constitution[...]
August 6, 2010 | Tags: 88 Generation Students, All Burma Federation of Student Unions, All Burma Monks' Alliance | Read more >>
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ၂၉.၃.၂၀၁၀ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးမှ မတရားသည့် ဥပဒေများ အောက်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ရန် ကန့်ကွက်မဲမရှိ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွင်ရှိသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍကို ရဲဝံ့တည်ကြည်စွာ ဖေါ်ပြရာရောက်သည့်အပြင်၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုအပေါ် တာဝန် ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် ပြည်သူ့ပါတီ ပီသကြောင်း ဖေါ်ပြလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။[...]
March 30, 2010 | Tags: 88 Generation Students, All Burma Federation of Student Unions, All Burma Monks' Alliance, Burmese, Election Laws, National League for Democracy | Read more >>
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ နှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် တို့မှ နအဖစစ်အုပ်စု၏ စစ်အာရှင်စနစ် တရားဝင်ရေရှည်တည်တံ့စေမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ရန် နှိုးဆော်စာ ထုပ်ဝေလုပ်ပါသည်။ ထိုနှိုးဆော်စာတွင် နအဖမှ ကြော်ငြာခဲ့သော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ တို့သည် စစ်အုပ်စု၏အစဉ်အလာအတိုင်း လက်နက် အားကိုးဖြင့် ပြည်သူလူထုကို တဖက်သက် အဓမ္မ အနိုင်ကျင့်နိုင်ရန် စီမံပြုလုပ်ထားသော ဥပဒေများဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပြည်သူများက ယုံကြည်ကိုးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင်း မဖွဲ့ဘဲ နအဖစစ်အုပ်စု ကစိတ်ချရသော လက်ကိုင်ဒုတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကို နအဖ စစ်အုပ်စု အလိုအကျအတိုင်း ဆောင်ရွက်တော့မည်မှာ ပိုမိုထင်ရှားစေသည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စသည့် အချက်များအခြေခံ၍ အခြားသော အချက်များလည်း ထည့်သွင်း ထုပ်ပြန်ထားပါသည်။[...]
March 11, 2010 | Tags: 88 Generation Students, All Burma Federation of Student Unions, All Burma Monks' Alliance | Read more >>
(1) On the 8th of March, the Burmese military junta eventually announced the first of the electoral laws. To date the law for the election commission and the law for the registration of political parties have already been announced. Both of these laws are biased and result in the oppression of the people.[...]
March 10, 2010 | Tags: 88 Generation Students, All Burma Federation of Student Unions, All Burma Monks' Alliance, Election Laws | Read more >>